मैले अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, नागार्जुनलगायत अभिनेतासँग काम गरेकी छु। बलिउड र दक्षिण भारतीय फिल्ममा काम गरेकी छु।
अहिले समय बदलिएको छ। अहिले कालो वर्णबारे खुलेर चर्चा हुन थालेको छ। तर, सन् १९९० को दशकमा बलिउडमा प्रवेश गर्दा छालाको रङ मेरो शत्रुजस्तै बन्यो। गहुँगोरी भएकाले मैले
बलिउडमा धेरै भेदभावको सामना गर्नुप¥यो। फिल्म इन्डस्ट्रीमा ३० वर्षसम्म काम गरेँ। यसअघि कहिल्यै आफ्नो छालाको रङबारे बोलेकी थिइनँ।
पहिलो फिल्ममा अभिनेता अक्षय कुमारसँग काम गरेँ। त्यतिखेर दुई सय क्रू मेम्बरका अगाडि मलाई सोधिन्थ्यो– ‘तपाईंको मेकअप कसले ग¥यो ?’ अचानक सुटिङ रोकिन्थ्यो। मलाई भनिन्थ्यो– ‘हिरोसँग तपाईंको मेकअप मिलेन।’ हिरोको छालाको रङसँग मिल्ने गरी फेरि मेकअप गरिन्थ्यो। यसो हुँदा अपमानित महसुस गर्थें।
मलाई आफ्नो छालाको रङमाथि गर्व थियो। तर, त्यही वर्णका कारण हरेक दिन मलाई सयौँका सामु अपमानित गरिन्थ्यो। सुटिङ हुने दिन लाग्थ्यो– आज मेरो छालाको रङको चर्चा नभइदिए हुन्थ्यो। सेटमा जाँदासमेत डर लाग्थ्यो। आज कुन चाहिँले मेरो गहुँगोरो रङमाथि के टिप्पणी गर्ने हो ? भन्ने लाग्थ्यो। कसरी बच्ने होला ? के प्रतिक्रिया दिने होला ? भनेर सोच्थेँ। सेटमा मेरो वर्णको चर्चा नहोस् भनेर स्क्रिप्ट, ड्रेसभन्दा बढी ध्यान मेकअपमा दिन्थेँ। छालाको रङका लागि मलाई त्यहाँ यति सुनाइयो कि एकताका हीनभावनाले ग्रसित भएँ। त्यसको असर मेरो काममा प¥यो। मनोबल टुट्यो, आत्मविश्वास डगमगायो। न राम्ररी फिल्मको कथा सुन्थेँ, न फिल्मबारे मेरा दिमाग चल्थ्यो।
यस्ता मानिस र टिमसँग काम गर्न चाहन्थेँ, जसले मेरो छालाको रङमा टिप्पणी नगरून्। गहुँगोरी भएकाले मैले बलिउडमा धेरै हन्डर खाएँ। ‘सौगन्ध’ पछि अक्षय कुमारसँग फिल्म ‘इक्के पे इक्का’ मा काम गरेँ। त्यसमा मेरो चरित्र एक मोडर्न केटीको थियो। त्यसका लागि मैले सर्ट ड्रेस लगाएकी थिएँ। सँगै, छालाको रङको स्टकिङ लगाउँथेँ। सुटिङमा अक्षय हँसीमजाक गरिराख्थे। एक पटक उनले मेरो छालाको रङलाई लिएर ठट्टा गरे। त्यस दिन क्लाइमेक्सको सुटिङ थियो। स्टकिङ लगाउँदा मेरा घुँडा बढी नै काला देखिएका थिए। एक सय जनाका अगाडि अक्षयले भने, ‘शान्तिको खुट्टामा ठूलठूला रगतका धब्बा (ब्लड क्लट्स) छन्।’ उनले सबैलाई देखाउँदै, धेरै पटक यो कुरा दोहो¥याइरहे। मैले केही बुझ्न सकिनँ। ‘आफ्नो घुँडा हेर,’ अक्षयले भने। उनको कुरा सुनेर छक्क परेँ। एकदमै असहज महसुस गरेँ। सबैका सामु अक्षय कसरी यस्तो कुरा भन्न सक्छन् भन्ने लाग्यो। उनले मजाक गरेका थिए। तर, त्यो कुरा मलाई नराम्ररी बिझ्यो। त्यस घटनापछि म डिप्रेस्ड भएँ। आमाकोमा गएँ। धक फुकाएर रोएँ। त्यो कुरा आजसम्म बिर्सिन सकेकी छैन।
त्यतिखेर हामी भर्खरका थियौँ। अक्षयले पनि हँसीमजाकमा त्यसो भनेका थिए। तर, रङबारे गरिएको मजाकले कुनै व्यक्तिमाथि कतिसम्म असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ।
एउटा फिल्मबाट म काली भएकै कारण निकालिएँ। मेरो छालाको रङ फिल्मकारलाई मन परेन। अजय देवगनसँग गरिने अर्को फिल्मबाट पनि मलाई कालो वर्णका कारण निकालियो। फिल्म बनाउने मान्छेका लागि म धेरै काली भएँ। उनलाई फिल्ममा गोरी हिरोइन चाहिएको थिई। फिल्मबाट निकालिँदा मेरैअगाडि भनिन्थ्यो– ‘तिमी गोरी छैनौ। त्यसैले फिल्ममा लिन सक्दैनौँ। हामीलाई फिल्ममा गोरो छाला भएकी हिरोइन चाहियो।’ मेरी बहिनी भानुप्रिया पनि रंगभेदको शिकार भइन्। उनको छालाको रङबारे थुप्रै पत्रपत्रिकामा लेखियो। जब उनी बलिउडमा आएकी थिइन्, त्यतिबेला दक्षिण भारतीय फिल्मबाट जयाप्रदा, रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवीलगायत अभिनेत्रीले काम गरिरहेका थिए। बलिउडको गुटबन्दीका अगाडि उनी हारिन् र बलिउडमा काम गर्न छोडिन्।जे जस्तो भए पनि मैले गोरो हुने क्रिम भने कहिल्यै लगाइनँ।
कति लजाउने, कति लुकाउने ?